GNOME 42 inosvika nemudziyo mutsva wekutora, pakati pevamwe | Linux Addicts
Tichazofanira kumirira kuti tikwanise kuishandisa mukugovera kwakawanda, asi isu tatova nayo pano. Iyo purojekiti kuseri kweinonyanya kushandiswa desktop muLinux akakanda nhasi GNOME 42. Kuburitswa uku kunouya mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudzwa, alpha yako, Beta yayo y wako Release Candidate, iya yatasvitswa nhasi svondo rapfuura. Kana iri yekusunungurwa ine shanduko dzinonakidza, zviri pachena zvinoenderana nekuti tinobva kupi, asi pane zvimwe zvinhu zvakakodzera kutaurwa.
Kusiyana nemapurojekiti akaita seKDE, ine zita renzvimbo yayo yegraphical (Plasma) uye imwe yayo seti yemapurogiramu (KDE Gear), kana tichitaura nezveGNOME tinogona kunge tichitaura nezve graphical nharaunda, maapplication kana desktop yese. Ndokusaka tichifanira kuratidza kanenge maviri maapplication achave aripo kubva nhasi: imwe yacho ndeye screenshot tool, iyo ichatibvumira kuti tiite, mukuwedzera kune achiri snapshots, marekodhi ezvese zvatinoda; imwe yacho a text editor iyo inotsiva Gedit seyakagadzika mupepeti wepurojekiti. Zvichave kune kugovera kunamatira neGedit kana chinja kune mutsva edhita.
Pfungwa dzeGNOME 42
New text editor yaizotsiva Gedit.
Maitiro eiyo GNOME system mushandisi interface yakagadziridzwa. Zvizhinji zvekuchinja uku kwakajeka, zvichiita kuti iwedzere kupenya uye kutaridzika kwakanaka. Sechikamu cheshanduko iyi, chimiro cheGNOME zviratidzo zvekufananidzira chakagadziridzwa zvakare.
Iyo Mafaira app ine nyowani inotenderera nzira bhaa, yakagadziridzwa zita rezita interface, uye yakagadziridzwa zvidhori.
Mabhokisi, GNOME's virtual muchina application, ine akagadziridzwa zvaunofarira maonero uye ane tsigiro iri nani yeazvino UEFI masisitimu anoshanda.
MuVhidhiyo, kutamba midhiya iko zvino kunogona kudzorwa kuburikidza neakavakirwa-mukati midhiya kudzora mune yekuzivisa runyorwa.
Sezvatakataura, GNOME 42 haisi desktop chete, asiwo chikamu che shanduro itsva dzemaapplication. Mamwe acho achaonekwa munguva pfupi paFlathub, uye zvese zvatove zviripo mune kodhi fomu. Kana iri iyo ichave yekutanga kugovera kuitora, ndaizobheja paArch Linux, ichiteverwa nevamwe vane modhi yekusimudzira iriwo Rolling Release. Mumavhiki anouya ichasvika muUbuntu 22.04 uye Fedora 36.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 42 inosvika nechishandiso chitsva chekutora, kuvandudzwa kune rima dingindira uye mutsva wemavara edhita, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.
Qt Musiki 7.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo